Namathisela i-AirTag kwi-Siri Remote ye-Apple TV ukuba unayo umshicileli we-3D | Ndisuka mac
El I-AirTag Inika okuninzi ukuba ithethe. Le tracker intsha yeApple inamandla amabini amakhulu okuba sisixhobo esithengisa kakhulu kwinkampani ngokwenani leeyunithi. Enye yazo kukungqinelani kwayo. Incinci, kwaye ibhetri ihlala unyaka.
Kwaye okwesibini ixabiso. Kuba 35 Euroune tracker elungileyo eyakhelwe kwinkqubo ka Apple "Khangela". Ke ukuba unayo iprinta ye-3D kunye nengcinga encinci, ngoku unokubeka i-AirTag kwizinto ezahlukeneyo oqhele ukulahlekelwa zizo, ezinje nge-Apple TV remote control.
I-AirTag ibisemarikeni kuphela iintsuku ezilishumi kwaye ukuba unayo 3D iphrintaUngasele uzifumene zonke iintlobo zezicwangciso kwi-intanethi zokwenza inkxaso yeplastikhi kwaye uncamathisele umkhondo we-Apple kwizinto oqhele ukuphulukana nazo, okanye woyike ukwenza njalo.
Kwenzekile kuthi sonke. Uyifumana ekhaya, yikhuphe ngaphandle kwebhokisi, idibanise ne-iPhone yakho kwaye uyivavanye. Kwaye xa uyibona isebenza, ingqondo yakho iqala ukukuqhushumbisa kuzo zonke iindawo apho "kufanele" ubambe enye. Kuya kufuneka uyazi ukuba iApple ayikuvumeli ukuba ulawule ngaphezulu kweeyunithi ezili-16 ngomsebenzisi ngamnye. Okwangoku
Ungayiprinta ngeprinta ye-3D
Umsebenzisi okrelekrele (ShicilelaSpiredDesigns) uxhonyiwe kwiqonga lokuthenga nokuthengisa Etsy istili seplastiki esenziwe ngomshicileli we-3D ukuze sigcine ulawulo lwe-Apple TV kude, kwaye ngasemva, yi-AirTag. Uluvo olukhulu.
Ke ngekhe uphinde uphambane ukhangela i- Siri kude. Nge-iPhone yakho uya kuyifumana kwangoko. Ungayithenga nge-13 yeeYuro, okanye ukhuphele isicwangciso se-STL see-2 Euro kwaye uziprinte ngokwakho ukuba unayo iprinta ye-3D.
Ukuba unayo umshicileli we-3D, yenza uphando kwi-intanethi kwaye uya kuba nakho ukufumana iimeko ezingenakubalwa zazo zonke iintlobo zokuncamathisela i-AirTag kwizinto ezininzi. Umkhuhlane we-AirTag uqalile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Namathisela i-AirTag kwi-Siri Remote kwi-Apple TV ukuba unayo umshicileli we-3D